Baidoa Media Center » Wefdi ka socda maamulka Ximin iyo Xeeb oo booqasho ku jooga degmada Hobyo.
Wefdi ka socda maamulka Ximin iyo Xeeb oo booqasho ku jooga degmada Hobyo.
October 14, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Wefdi ballaaran oo ay ku jiraan wasiiro katirsan maamulka Ximin Iyo Xeeb ayaa waxa uu booqasho ku joogaa magaalada xeebta ku taala ee Hobyo halkaasaa maalmo kahor lagusoo rasaaseeyay jeneraal Cabdi Qaybdiid Cawaale, madaxweynaha maamulka Galmudug.
Wafdiga Ximin iyo Xeeb ayaa u sheegay inay u kuur galayaan xaalada guud ee magaalada Hobyo ayaga oo booqaday dekeda macmalka ah ee magaalada iyo qaybo kamid ah magaalada ayaga oo ugu baaqay maamulka Galmudug gaar ahaan Cabdi Qaybdiid inuu dhibka ka daayo dadka walaalaha ah ee kuwada dhaqan magaalada Hobyo waa sida ay hadalka u dhigeene wasiirada Ximin iyo Xeeb.
Degmada Hobyo ayaa waxaa wada dega beelo ku kala abtirsado maamulada Galmudug iyo Ximin iyo Xeeb ayada oo uu maamul kastana sheeganayo maamulkeeda, balse waxaa muuqato inay magaalada laba u kala qaybsantahay.
Dhawaan ayay ahayd markii wafdi ay rag ajaanib cadaan ah ku jireen oo uu hogaaminayay Cabdi Qaybdiid lagusoo rasaaseeyay degmada Hobyo ayaga oo dib ugusoo laabtay magaalada Gaalkacyo isla markaasna uu Cabdi Qaybdiid sheegay inay Hobyo katirsantahay maamulkiisa Galmudug.
Wefdiga Ximin iyo Xeeb ee booqashada hada ku jooga Hobya ayaa ku hubeysan gaadiidka gaashaaman ayaga oo sidoo kalena wata gawaarida dheeraysa ee Landcruisarada loo yaqaano oo ay Soomaalidu sida weyn u adeegsato.
Ma Mudna In La Eedeeyo Wasiirka Gaashaandhiga Mudane C/xakiin Fiqi.June 18, 2013
Daawo Sawirada hub iyo saraakiil ciidamo Kenyan ah oo ay Alshabaab soo bandhigtay.June 17, 2013
Dhegayso proff. Heerow oo ka hadlay mideynta manhajka Soomaaliyeed.June 17, 2013
Madaafiic xalay lagu weerary xarunta madaxtooyada iyo howlgalo saakay socda.June 17, 2013
Madaxweyne Xasan Sheekh oo kasoo amba baxay Lodon isaga oo aan ka qaybgelin shirka madaxda G8.June 17, 2013
Nabadsugida Kenya oo dhac iyo handadaad ugu geystay Nairobi xildhibaano Soomaaliyeed. (Xog xasaasi ah)June 17, 2013
Xisbi siyaasadeed oo lagaga dhawaaqay Addis ababa. (Sawiro)June 16, 2013
Askar fara badan oo maanta tababar loogusoo xiray magaalada Muqdisho.June 16, 2013
Gudoomiyaha jabhada Raaskambooni oo u amba baxay Puntland iyo Itoobiya.June 16, 2013
Masar oo xiriirka u jartay Suuriya kuna baaqday in laga sameeyo Suuriya aag duulimaadyada ka caagan.June 16, 2013